iPi Soft သည် USB ကင်မရာ ၁၆ ခု၊ Kinect 16 အာရုံခံကိရိယာလေးခုနှင့် Actor Tracking သုံးခုအတွက် Motion Capture အထောက်အပံ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ |2NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » iPi ဖျ 16 ကို USB ကင်မရာများကို, လေး Kinect က2အာရုံခံခြင်းနှင့်သုံးမင်းသားခြေရာကောက်အဘို့ကို Motion Capture အထောက်ပံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
iPi ဖျ 16 ကို USB ကင်မရာများကို, လေး Kinect က2အာရုံခံခြင်းနှင့်သုံးမင်းသားခြေရာကောက်အဘို့ကို Motion Capture အထောက်ပံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
မော်စကိုရုရှား - iPi ဖျ, LLCဒီနေ့မှစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ groundbreaking ထုတ်ပြန်ကြေညာ iPi Motion ဗားရှင်း 3.0 Capture, markerless ရွေ့လျားမှုဖမ်းနည်းပညာ၏ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်လိုင်းကို။ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 16 ကို USB camera ကိုထောက်ခံကြောင်းသို့မဟုတ်တူညီသောရွေ့လျားဖမ်းယူ session တစ်ခုအတွင်းမှာမျိုးစုံ PC များပေါ်သို့မှတ်တမ်းတင်ထားသောမျိုးစုံ Kinect က2အာရုံခံကိရိယာမှတက်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ညှိသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးများအတွက်စံသတ်မှတ်အသစ်ဖြန့်ဝေမှတ်တမ်းတင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်သုံးသရုပ်ဆောင်တွေကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းတစ်ပြိုင်နက်ရုပ်ရှင်, တီဗီ, ဗီဒီယိုဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ကျော်လွန်ပြီးအလုပ်လုပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအစွမ်းထက်နှင့်အကျိုးရှိစွာရွေ့လျားမှုဖမ်းယူ tool ကိုပေးသည်။
ယင်း၏စီးပွားဖြစ် iPi Recorder ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြု Enabled သစ်ဖြန့်ဝေမှတ်တမ်းတင်အင်္ဂါရပ် 8 ကို USB ကင်မရာများသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်း Kinect က2အာရုံခံကိရိယာမှတက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့တစ်ခုတည်းကွန်ပျူတာကိုစီစဉ်ပေးသည်။ အပိုဆောင်းကွန်ပျူတာများနှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများအ 16 ကို USB ကင်မရာများသို့မဟုတ်လေးခု Kinect က2သို့မဟုတ် Kinect ကအာရုံခံကိရိယာမှတက် add နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းဖိုင်သို့ mocap အချက်အလက်များ၏အားလုံးရောနှောပေါင်းစပ်သွားလေသည်သော software များ, တစ်ပြိုင်နက်သုံးသရုပ်ဆောင်များကိုမှတက်ခြေရာခံဘို့ iPi Mocap စတူဒီယိုနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည်။ Multi-ကင်မရာ (သို့မဟုတ် Kinect ကအာရုံခံကိရိယာ) ကိုဗီဒီယိုအသံသွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၎င်း၏စွမ်းရည်, စံ PC ကို desktop သို့မဟုတ် laptop ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ 3D လူ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံများနှင့် 3D ကာတွန်းထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကျထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
ထို့အပြင် Multi-သရုပ်ဆောင်ဖျော်ဖြေပွဲကိုဖမ်းယူဖို့ပိုကင်မရာများသို့မဟုတ်အာရုံခံကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်ခြေရာခံခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, (ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုစနစ်တကျဖမ်းမရကြသောအခါ) ပုံမှန်အား occlusive ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခြေရာခံခြင်းအမှားများကို minimize လုပ်အဖြစ်ပိုမိုမြန်ဆန်နှင့်ပိုပြီးတိကျမှု ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို။
"iPi in Motion မှာအသစ်ဖြန့်ဝေမှတ်တမ်းတင်အင်္ဂါရပ် 3.0, တစ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲယနေ့ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုကြီးထွားလာရှုပ်ထွေးတွေ့ဆုံရန်ဖောက်သည်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာ option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထား Capture" မိုက်ကယ် Nikonov, iPi ဖျရဲ့တည်ထောင်သူ / ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာဗိသုကာ, ကပြောပါတယ်။ "ဒီတိုးမြှင့်ကင်မရာကိုအထောက်အပံ့နှင့်တိုးတက်လာသောခြေရာခံခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရပာသို့မဟုတ် choreographed ကခုန်တိုက်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောအားကစားရွေ့လျားအဖြစ်ရှုပ်ထွေးရွေ့လျားမှုဖမ်းဆီးဖို့ရှာဖွေနေဆက်ကပ်အပ်နှံစတူဒီယိုအာကာသနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများအထောက်အကူပြုဖြစ်၏။ "
Nikonov ဘုံနားလည်မှုလွဲပရော်ဖက်ရှင်နယ် high-definition ကင်မရာများ အသုံးပြု. တိကျရွေ့လျားမှုခြေရာခံခြင်းများအတွက်မဖြစ်မနေကြောင်းကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဒါကအမှတ်အသား-based စနစ်များများအတွက်မှန်ပေမယ့်ငါတို့ကဲ့သို့ markerless mocap ဖြေရှင်းချက်များအတွက်, high resolution ကတော့ကြောင့်အလွန်အရေးပါသည်မဟုတ်။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ USB ကကင်မရာများသို့မဟုတ် Kinect ကအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုအမှတ်အသား-based စနစ်၏ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာအတူတူပင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်တယ်။ "
iPi in Motion မှာနယူး Feature ကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည် V ကို 3.0 Capture:
iPi in Motion မှာယခုရရှိနိုင်အသစ်စွမ်းရည်ဗားရှင်း 3.0 Capture, ပါဝင်သည်:
16 မှတက်နှင့်အတူ mocap data တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့•နိုင်ခြင်း Sony က PS3 ကင်မရာများသို့မဟုတ်4Kinect က2အာရုံခံကိရိယာမှတက်
တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ရန်သုံးသရုပ်ဆောင်များကို၏• Track စွမ်းဆောင်ရည်ကို
•အခြေခံပညာ Edition ကိုအတွက်ကင်မရာထောက်ခံမှုခြောက်လမှလေးခုကနေတိုးတကျခဲ့
•ကြောင့်လျှော့ချ occlusive မှတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြေရာခံတိုးတက်လာသော
•မှတ်တမ်းတင်ဘို့အများအပြားလက်ပ်တော့ / desktops တွေနဲ့သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ကြောင့်လျှော့ချဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကို
• Flexible နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာ - စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကို PC Laptop တွေသို့မဟုတ် desktops တွေနဲ့အတူတွဲဖက်သုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကို
iPi Motion V ကို 3.0 စာရင်းသွင်းခြင်း-based စျေးနှုန်းမော်ဒယ်ပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် Capture ။ စျေးနှုန်းများဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း (Express ကို, အခြေခံ, Pro ကို) နှင့်ကြေးပေးသွင်း၏ကြာချိန်ပေါ် မူတည်. $ 45.00 မှ $ 1,195.00 ကနေအထိ။ အခြေခံပညာထုတ်ဝေ6အထိထောက်ပံ့ပေးပါသည် Sony က PS3 မျက်လုံးကင်မရာများသို့မဟုတ်2Kinect ကအာရုံခံကိရိယာများနှင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသရုပ်ဆောင်များကို၏ခြေရာခံ။ အဆိုပါ Pro ဗားရှင်းအပြည့်အဝ 16-ကင်မရာ /4Kinect ကအာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်3သရုပ်ဆောင်များကိုမှတက်၏ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
ဗားရှင်း 30 များအတွက်အခမဲ့ 3.0 နေ့တရားခွင်ကဒီမှာရရှိနိုင်ပါသည်: ipisoft.com/download/
ဒီနေ့ရဲ့ကြေငြာချက်နှင့်အညီ, iPi ဆော့ဖလည်းလေးကနေခြောက်လမှ၎င်း၏ iPi Mocap အခြေခံပညာ Edition ကိုအတွက်ထောက်ခံကင်မရာများများ၏အရေအတွက်တိုးထောက်ပံ့နေသည်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုဆွဲဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုမှဆက်ပြောသည်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုစျေးနှုန်း 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
iPi ဖျ 3.0 နှင့် Multi-tier subscription ကိုစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. ဖြည့်စွက်အသေးစိတျကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်: ipisoft.com/store/version-3-0/
Demo ကိုဗီဒီယို: www.youtube.com/watch?v=lGg-fAhaWkk
iPi Motion Capture အအကွောငျး:
iPi Motion Capture အအလွယ်တကူ 3D ကာတွန်းထုတ်လုပ်ရန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံဖို့ markerless ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူဆော့ဖျဝဲကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအရွယ်မှာစနစ်အားတက်3မှသရုပ်ဆောင်များကို၏ခြေရာခံနိုင်စွမ်းနှင့် 360-ဒီဂရီလှည့်အပါအဝင်ရှုပ်ထွေးလှုပ်ရှားမှု, ဖမ်းဆီးဖို့တစ်ဦးသို့မဟုတ်အများအပြားကွန်ပျူတာများအပေါ်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ပထမနှင့်ဒုတိယမျိုးဆက် Kinect ကအာရုံခံကိရိယာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကဲ့သို့သောအခြားအတန်ဖိုးနည်း Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ Sony က PS3 မျက်လုံးကင်မရာများ။
အဆိုပါ software ကိုအပါအဝင်လည်းအများအပြားဦးဆောင်ဂိမ်းအင်ဂျင်များ, 3D ဆော့ဖျဝဲ application များနှင့်ကာတွန်းတူးစင်နှင့်သဟဇာတဖြစ် MAXON ရုပ်ရှင်ရုံ 4D, Autodesk 3D စတူဒီယိုမက်စ / မာယာ / MotionBuilder, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး, Valve ရင်းမြစ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ / ရင်းမြစ်အင်ဂျင်, DAZ စတူဒီယို, Poser, iClone, Unreal Engine ကိုများနှင့်အခြားသူများကို။ iPi Motion Capture အ FBX, BVH နှင့် COLLADA အပါအဝင်လူကြိုက်များကာတွန်းကို formats ဖို့အဆိုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပို့ကုန်ထောက်ခံပါတယ်။
မော်စကို-based ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, iPi ဖျ, LLC, လူ့ခန္ဓာကိုယ်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ခြေရာခံဖို့ခေတ်မီ image processing တွင်နှင့်ကွန်ပျူတာရူပါရုံကို algorithms အသုံးပြုအစွမ်းထက် markerless ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူဆော့ဖျဝဲနည်းပညာဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုကွန်ပျူတာရုပ်ရှင်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဖြစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ရေးနှင့်အခြား application များအတွက်, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုများအတွက် 3D ဇာတ်ကောင်အတွက်ဖော်ပြကြောင့် rendering, လူသားတစ်ဦးအရိုးစုများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုဖျက်ပစ်ဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် prosumers နေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ iPi ဖျ, ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း, ထုတ်ကုန် configurations တစ်ခုသို့မဟုတ် 30 ရက်ကြာအခမဲ့စမ်းသပ်ပေါ်တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ, www.ipisoft.com.
iPi ဖျ Markerless Motion အရွယ်ရောက်ရေကူးစီးရီး၏ဒုတိယအရာသီမှာတော့ "အိပ်မက်ထဲက Corp က LLC" ဆော့ဝဲ Play ပေါင်းစည်းထားအခန်းကဏ္ဍ Capture - ဧပြီလ 30, 2019
iPi Motion Capture အ iPi ဆော့ဖ markerless ရွေ့လျားမှုဖမ်းမိ post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2015-02-27
ယခင်: အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်းဗီဒီယိုသတင်းစာဆရာသည် MILLER AIR TRIPOD SYSTEM နှင့်အတူကွင်းဆင်းအစီရင်ခံစာများကိုစိန်ခေါ်နေခြင်း
နောက်တစ်ခု: Glookast - အကော်စေသည်ခညျြနှောငျ! 2015 NAB Show မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုပါ